tarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina. Efa nahazo fahazoan-dalana avy amin’ny prefektioran’ny polisy eto Antananarivo izy ireo raha araka ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety teny Anosizato afaka omaly alarobia 20 mey. Afaka miasa an-kalalahana araka izany izy ireo hitsabo ny Malagasy amin’ny alalan’ireo karazana ravinkazo, hambolena any Farafangana, haodin’ireo fitaovana goavam-be sy manara-penitra toy ny lapika… nafarana avy any Amerika. Hisokatra sy hivelatra manerana ny Nosy araka izany ny FITRAMA ka eny amin’ireo biraon’ny Hafari Malagasy manerana ny Nosy no ahitana azy ireo. Tsy hijanona hatreo ny fiaraha-miasa. Hanofana olona miisa 200 ihany koa ny roa tonta izay hizara ho ekipa efatra. 50 mianadahy isanisany no hifanome tanana amin’izany, hofanina ho lasa tradipraticien. Nandritra ny roa andro moa no nanatanterahana izany fiofanana izany hanomezana fahafaham-po ny mpiray tanindrazana.